Mamnuucida dib u gelida - Migrationsverket
/ Mamnuucida dib u gelida
Återreseförbud – somaliska
Haddii aadan uga tagin Sweden muddada la qeexay ee go'aankaaga, waxaa laguu sameyn karaa mamnuuca dib u gelida. Xaaladaas, kuma laaban kartid mid ka mid ah wadamada Aaga Schengen, ama Romania, Bulgari iyo Croatia gudaha muddada gaarka ah. Haddii Wakaalada Socdaalka Swedish aysan aaminsaneyn in aad uga tageysid Sweden si aan khasab ahayn, waxaa lagu siin karaa mamnuucida dib u gelida.
Haddii aad heshay go'aanka diidmada gelida oo markaas degdeg u dhaqan galaya, waxaa marwalba laguu sameynayaa mamnuucida dib u gelida.
Mamnuucid adib gelida ee sababaha kale
Haddii Hay'ada Socdaalka Swedish aysan aaminsaneyn in aad uga tageysid Sweden si iqtiyaar ah, waxaa laguu soo saarayaa mamnuucida dib u gelida oo daboolayo aaga Schengen, taas oo shaqeyneysa ilaa shan sanno. Tusaale ahaan, waxaad heli kartaa mamnuucida dib u gelida haddii aad:
horay ugu aaday dhuumasho;
dhahday in aadan rabin in aad ka tagtid Sweden;
isticmaashay aqoonsi been ah ama aadan ku caawin Wakaalada Socdaalka dejinta aqoonsigaaga dhabta ah;
si ula kac u sheegtay macluumaad khalad ah ama aad reebtay macluumaad muhiim ah; ama
laguugu xukumay dambi oo laga yaabo in ay ciqaabtiisu tahay xadhig xabsi.
Haddii laguu soo saaray mamnuucida dib u gelinda oo mid ka mid ah sababaha kore, waxaad khasaarinaysaa muddada ku noqoshada ikhtiyaarka ah oo waxaad uga tageysaa wadanka si degdeg ah.
Khasaarintaa muddada ku laabashada aan khasabka ahayn waxay sidoo kale la micno tahay in aad khasaarisay xaquuqdaada hoyga iyo taageerada dhaqaalaha ee ka imaanaya Wakaalada Socdaalka. (Qoysaska carruurta leh waxay joogteyn karaan kaalmadooda joogtada ah oo laga yaabo in ay joogaan hoyga Wakaalada Socdaalka ilaa ay ka tagaan Sweden.)
Ixtiraam muddada ku laabashada iqtiyaarka ah
Markii go'aankaaga dhaqan galo (la dhaqangeliyo), waa in aad kaga tagtaa Sweden gudaha labba ilaa afar todobaad. Inta wakhti ah ee aad jhaysatidwaxaa lagu sheegay go'aankaaga.
Waxaa lagu siin karaa waqti badan oo aad wadanka uga tagtid haddii aad haysid sababo la oggolaan karo. Haddii aad u baahantahay waqti badan, waa in aad kuw argelisaa Wakaalada Socdaalka sida ugu dhaqsaha badan oo suurtogalka ah.
Ka hor inta aadan ka tagin wadanka, Wakaalada Socdaalka waxay ku siineysaa shahaadada loo yaqaan caddeynta ka bixitaanka. Ku wareeji shahaadada marka aad dhaaftid maamulka xaduudka Swedish si aad u ogeysiisid Wakaalada Socdaalka in aad ka tagtay wadanka. Haddii aadan soo dhiibin shahaadada oo sababo qaarkood darteeda, weli waxaad caddeyn kartaa in aad wadanka kaga tagtay Sweden waqti buure ah, tusaale ahaan adiga oo tusaya tikidhada ama shaambadaha baasaboorkaaga. U soo bandhig caddeynta aad haysatid in aad gudubtay xaduudka safaarada ugu dhow ee Swedish ama qunsulka guud, ama koobi samee iyada ah oo boostadda ugu soo dir Wakaalada Socdaalka Swedish. Waa masuuliyadaada in aad soo gudbisid caddeynta ah in aad ka tagtay Sweden waqti buure ah haddii aadan rabin in laguu soo saaro mamnuucida dib u gelida.
Wakaalada Socdaalka way ka laaban kartaa mamnuucida dib u gelida haddii ay kuu suurtogasho in aad caddeysid in aad ka tagtay Sweden inta lagu jiray muddada lagu qeexay go'aankaaga.
Ka dhaafida mamnuucida dib u gelida
Wakaalada Socdaalka Swedish laga yaabo in ay go'aansadaan in aysan sameynin mamnuucida dib u gelida ee tixgelinta duruufahaaga gaarka ah. Tani waxay dhici kartaa, tusaale ahaan, haddii aad qabtid carruur leh ruqsadaha daganaanshaha ee wadanka Schengen.
Wadamada soo socda waxaa daboolo Heshiiska Schengen
Austria, Belgium, the Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Iceland, Italy, Latvia, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Malta, the Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, iyo Switzerland.